Korontana feno nandriaka rà tao Peshawar · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Jolay 2018 15:00 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Jona 2009)
Renivohitry ny Faritany an-tsisintany ao Avaratra Andrefana ary foibem-pitantanana ireo Faritra ara-pokon'ny fanjakana federaly ao Pakistana i Peshawar . Eo akaikin'i Khyber, akaiky ny sisintany iarahany amin'i Afganistana no misy ilay tanàna. Io no vona ara-barotra, ara-toekarena, ara-politika sy ara-kolotsainan'ireo Pachtounes ao Pakistana, izay misahana anjara toerana voalohany ara-jeografika sy koltoraly eo amin'ireo Silamo mpanao an-tendrony, antonony sy liberaly. Nandritra ireo volana farany, toa voatafika avy amin'ny lafy rehetra ilay tanàna taorian'ny fanafihana am-baomba mihoatra ny 8 izay nahafaty olona am-polony.
Niteraka korontana nanerana an'i Peshawar manontolo ny fanafihana iray nikendry ny ‘Pearl Continental’, hôtely kintana dimy tao amin'ny faritra iray voaaro tsara, andro vitsivitsy lasa izay. Manome ny antsipirihany mikasika izany ny Al Jazeera amin'ny teny anglisy [amin'ny teny anglisy avokoa ireo rohy rehetra]:
Manadihady ilay fanafihana i Kulsoom Lakhani ao amin'ny Changing Up Pakistan:
Nilaza ireo manampahefana amerikana fa tsy nisy na iray aza Amerikana voasoratra tao amin'ny Masoivoho nipetraka tao amin'ilay hôtely, [tsy midika izany fa tsy nisy Amerikana tao amin'ny Pearl Continental, fa hoe tsy nisy voasoratra fotsiny tao]. Manantena aho fa miresaka momba ireo pakistaney niharam-boina tamin'ity fanafihana ity ihany koa ny vaovao. Mpiasan'ny hôtely maro no toa maty, toy ny tamin'ilay baomba tao amin'ny Marriott tao Islamabad.
Manana lanjany lehibe ilay tanàna amin'izao fotoana izao, satria mampiantrano tobina olona maro nafindra toerana. Ampiasaina ho toy ny toby miaramila ho an'ireo miaramila alefa hiady amin'ireo milisy (talibàna] ihany koa izy. Tsy afaky ny hampiseho ny fisiany ao an-tanàna ao anatin'izany toejavatra izany izy ireo, fihetsika tsy dia mahagaga loatra manoloana ny ady misy ao amin'ny distrikan'i Malakand. Voahidy avy any Avaratra sy Avaratra Atsinanana amin'ny alalan'ny havoana izay manasaraka azy amin'ny lohasahan'i Swat, izay iadian'ny tafika amin'ny talibàna ankehitriny, ny lohasahan'i Peshawar.
Mandinika ilay fanafihana tao Peshawar ny lahatsoratra iray ao amin'ny blaogin'ny Five Rupees:
Nanakorontana an'i Peshawar ilay fanafihana am-baomba lehibe, niteraka fahavoazana tsy hita noanoa tao amin'ny hôtely Pearl Continental – iray amin'ireo hôtely vitsivitsy ao amin'ny tanàna. Nampiantrano mpiasa maromaro avy amin'ny Firenena Mikambana sy ONG iraisam-pirenena, ary koa mpanao gazety vahiny maro ilay hôtely. Tao anatin'ny Fandaharanasa Ara-Tsakafo Manerantany avokoa ny ankamaroan'ireo mpiasan'ny Firenena Mikambana (loharano : Dunya News).
Fanafihana famonoantena iny. Tombanan'ny andiana mpanala vanja fa baomba teo amin'ny 500 ka hatramin'ny 550 kg teo no nampiasaina, izay nandavaka efa ho 3 metatra ny halaniny ary 8 metatra ny savaivony. Mpampihorohoro roa no teny, izay nitifitra mialohan'ny nidirana ny vavahadin'ny hôtely niaraka tamin'ny fiarany, izay toy ireo fanafihana vao haingana tao Lahore sy Islamabad.
Malahelo noho ireo andian-javadoza tao Peshawar i Faisal Kapadia ao amin'ny bilaoginy DeadPan Thoughts :
Voadona ny vahoaka ao Pakistana, fanafihana fahatelo tao anatin'ny herinandro maromaro ity, samy mitondra faty olona be kokoa avy ary ankehitriny hita eny an-dalambe rehetra isaky ny tanànantsika ny fahatsapàna ny ady izay tokony niseho tany anaty tendrombohitra lavitra tany.
Na amin'izao fotoana izao aza, mbola tsy afa-mihetsika ny polisim-pirenentsika, noho ny tsy fahampiana dokoteram-paty mba hitsongo dia ireo fahavalontsika, miaraka amin'ny fitaovana fadiranovana sy polisy iray ho an'ny olontsotra mihoatra ny 500, inona no mba fandriampahalemana azony omena antsika ?
Eo anivon'ilay ady miseho ao Swat ankehitriny, mihorohoro amin'ny fahitana ny fiharatsian'ny toedraharaha manerana ny firenena ny olona. Toa mitohy ary mahazo vahana kokoa amin'ny fikirizana ny valifaty ataon'ireo talibana hamelezan'ny tafika. Miseho izany rehetra izany kanefa mbola ambanin'ny tsindrin'ny krizin'ny maha-olombelona lehibe izay mananontanona ny firenena. Sakana lehibe amin'ireo hetsika ho an'ny maha-olombelona ny famonoana ny mpiasan'ny ‘UNHCR sy ireo ONG iraisam-pirenena.
Mizara ny heviny mikasika ny fahafatesana mpiasa ho an'ny maha-olombelona tao amin'ilay fanafihana farany teo i Raza Rumi avy ao amin'ny blaogy Pak Tea House :
Mitomany ny fahafatesana mpiasa mavitrika amin'ny maha-olombelona tao amin'ny hôtely Pearl Continental i Pak Tea House. Ho ahy izay ao anatin'ny ”tontolon'ny” fampandrosoana, tena manahirana be ny toe-javatra toy ireny. Raha toa ka miasa anatin'ny toe-javatra sarotra ireo matihanina amin'ny fampandrosoana noho ny andraikiny ao amin'ny asany izay, farafahakeliny, mifototra amin'ny idealisma. Malahelo amin'ny fahitana mpiasan'ny Firenena Mikambana izay namoy ny aina teo anilan'ireo andiana vahoaka pakistaney tsy nanan-tsiny izahay. Fa maninona no manono olona tsy manan-tsiny ireo mpanao an-tendrony- misafidy ny fahavalontsika isika rehefa ao anatin'ny ady, sa hoe izao no taratry ny korontana tian'izy ireo ateraka mba hahatonga izany ho faritra iray fanampiny atahorana kokoa.
Mampiseho ireo andiana herisetra ao Peshawar ireo fa hampiasa fomba lehibe mba handravana ny ‘fandriampahalemana’ ao Pakistana ireo milisy. Mandingana ny fetran'ny maha-olombelona rehetra ny herisetra ampiharin'izy ireo kanefa mbola manohy miasa tsy vitan'ny hoe mandrava fiainan'olona fa manakana ireo hetsika famonjena, izay mitondra amina korontana lehibe kokoa.